Marka laga hadlayo fadhiga, ikhtiyaar aan dhammaad lahayn ayaa laga soo saari doonaa maskaxdaada iyadoo ku saleysan cabirkooda, qaab, wax, farsamo yaqaan, iyo kuwa kale. Waxaa jira qaabab badan oo aad qiyaasi kartid inaad wajaheyso noocyo badan. Si kastaba ha noqotee, Saddexda waxyaalood ee aasaasiga ah ee go'aamiya qaabka fadhiga. Kuwaas waxaa ka mid ah gacmaha, gadaal, iyo lugaha fadhiga, iyadoon loo eegin inay tahay fadhiga buluug buluug ah. Dhabarka gadaashiisa, gacmaha, goonno, kursi, iwm, sharraxaad dheeraad ah ayaa la bixiyaa si wax looga ogaado kursi buluug buluug ah oo buluug ah ....
Navy Blue Corner Sofa oo loogu talagalay Qolka Fadhiga
Marka laga hadlayo fadhiga, ikhtiyaar aan dhammaad lahayn ayaa laga soo saari doonaa maskaxdaada iyadoo ku saleysan cabirkooda, qaab, wax, farsamo yaqaan, iyo kuwa kale. Waxaa jira qaabab badan oo aad qiyaasi kartid inaad wajaheyso noocyo badan. Si kastaba ha noqotee, Saddexda waxyaalood ee aasaasiga ah ee go'aamiya qaabka fadhiga. Kuwaas waxaa ka mid ah gacmaha, gadaal, iyo lugaha fadhiga, iyadoon loo eegin inay tahay fadhiga buluug buluug ah. Dhabarka gadaashiisa, gacmaha, goonno, kursi, iwm, sharraxaad dheeri ah ayaa la siiyaa si wax looga ogaado kursi buluug buluug ah oo buluug ah. Waxaa jira noocyo badan oo noocyo caan ah iyo kuwo la jecel yahay, kuwaas oo shanta nooc ee ugu caansan ay yihiin qayb, seexdo, dhaqameed, kursiga jacaylka, iyo chaise.
Qaabka qaybta waxaa loo dejiyaa siyaabo badan. Tusaale ahaan, L-qaab loogu talagalay geeska geeska, qaybo kala duwan oo qaab ah oo leh meelo fadhiga kala qaybsan ayaa u oggolaanaya fadhiga in dib loo habeeyo iyadoo lagu saleynayo tirada martida soo booqaneysa. Nooca 2aad waa mid hurda oo lagu sameeyo laba shaqo. Waxay noqon kartaa kursi inta lagu jiro maalinta, lid ku ah habeenkii, marka fadhiga sharafta laga qaado sariir isku laaban ayaa soo baxda.
Kadib waxaan ka hadli doonaa kursi jacaylka ugu muhiimsan, fadhiga buluugga buluugga ah ee buluugga ah oo caan noqday maanta. Caan ka noqoshada ayaa laga yaabaa inay ka dhalato baahideeda boos ka yar qol yar. Ka sokow, dusha sare ee fadhiga waxaa laga sameeyaa maro jilicsan oo jilicsan taas oo siinaysa kan ku fadhiya fadhiga dareen diiran oo jilicsan. Barkimooyinka cufan iyo dhabarka jilicsan ayaa isku dheellitiraya cududda ballaaran ee wareega, qoys kastaa ka buuxi raaxada dhan walba ah.
Nooca: Fadhiga Fadhiga Sofa Furniture; Hoteelka Huteelka; Hoolka hudheelka
Waxyaabaha: Maqaarka; Dhar; Lugaha Arcylicl; Qaab-dhismeedka Gudaha ee Qoryaha; Xumbo-cufnaanta sare
Muuqaal: Casri ah; Qaabka Mareykanka
Magaca badeecada: Navy Blue Corner Sofa
Lambarka Moodalka: #1124
Daboolka Waxyaabaha: Dhar
Shaqaynta: Wareeg Wareega Sofa
Cabbir(cm): 789/413L * 104W * 78 / 86H; Cabbirka loo habeeyay
Cabbirka(cm): 794L * 109W * 83H
Waqtiga wax soo saarka: 30-45maalmood
Shuruudaha Ganacsiga: FOB
Muddada Bixinta: T / T, 35% dhigid, dheelitirka kahor dhalmada
Xirxirida: Xirxirnaan Dheeraad ah
Damaanad: 2 damaanad sannadeedka dhismaha gudaha, 1 sanadka aniline iyo maqaarka sare ee hadhuudhka
Shahaadada: ISO9001; SGS;
1~ 3: EPE ku duubista fadhiga
4~ 6: Xumbo kartoon jiingado ah oo lagu duubo geeska
7~ 8: Waraaqda kartoonka ah ee ku duuban fadhiga, oo ay ku jiraan hoose
9~ 12: Lakabka dibedda oo aan tolmo wanaagsan lahayn.
S: Ma waxaad tahay soo saare ama shirkad ganacsi?
A: Waxaan nahay saldhig wax soo saar oo loogu talagalay alaabada dharka 1985.
S: Aaway warshadaadu?
A: Waxaan ku suganahay Shunde, Magaalada Foshan, Gobolka Guangdong, Shiinaha
S: Muxuu yahay adeeggaaga iibka kadib?
A: Waxaan haynaa mid ka mid ah raadinta kadib iibka. Haddii waxyeello ka timaadda gaadiidka ama arrinta tayada leh, waxaan ogaan doonnaa xalka oo waxaan ku siin doonaa jawaab celin.
A: MOQ waa 40HQ ama 20GP(Kharashaad dheeraad ah ayaa la codsan karaa), waxaad isku qasan kartaa shey kala duwan si aad isugu darto 40HQ ama 20GP.
S: Alaabtaadu ma ka gudbi kartaa imtixaanka mashruucyada huteelka?
A: Waxaan khibrad hodan u leenahay mashruucyada huteelka wax walboo agab ahna wey dhaafi karaan dabka iska caabinta sida CA117, BS5852, BS7177, BS7176, iyo E0 / E1.
S: Waa maxay shaqadaada ugu muhiimsan ee alaabtu?
A: Waxaan inta badan soo saarnaa Soofas, Sofabed, Furaash, Qoryaha wax qora, iyo Kuraas.
S: Ma dooran karaa midabka?
A: Haa, waxaan leenahay midabbo kaladuwan oo aan ka dooran karno qalab kala duwan sida maqaarka Top hadhuudhka, PVC, WAA, ama dhar.
S: Waa maxay waqtiga dhalmada?
A: Mar haddii aan helnay deebaajiga, waxay qaadan kartaa 30 ~ 35 maalmood.
S: Waa maxay shuruudaha bixinta?
A: Shuruudaha lacag bixinta waxay noqon doonaan FOB ilaa dekedda SHENZHEN. T / T, 35% dhigid, dheelitirka kahor dhalmada.
S: Ma haysaa kayd alaab ah?
A: Maya, waxaan nahay OEM iyo soo saaraha ODM, dhammaan alaabooyinka waxaa loo habeeyay macaamiisheenna.
S: Warshadu ma bixin kartaa muunada?
A: Waxaan si toos ah kuugu soo diri karnaa dharka ama shaybaarka maqaarka. Shayga ODM waa in laga qaadaa khidmadda saamiga ka dib 10 kumbuyuutarka ayaa soo celin doona khidmadda saamiga.
S: Waa maxay sumcadda dammaanadda ee alaabtaada?
A: Dammaanadda sofayaasha ayaa ah 2 sano ee dhismaha gudaha, 1 sanadka maqaarka dibedda; Furaash waa 10 sano qaab dhismeedka innerspring.
Couch Casriga ah ee Leather Recliner Couch
Xarunta Sofa Casriga ah